XOG: Natiijadii Ay Barcelona Kala Baxday Stamford Bridge Oo Aan Uga Dhicin Guul & In Ay Iska Xaadiriyeen Wareega Xiga & Chelsea Oo Aan Ka Dhicin – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Spain, Wararka Maanta XOG: Natiijadii Ay Barcelona Kala Baxday Stamford Bridge Oo Aan Uga Dhicin Guul & In Ay Iska Xaadiriyeen Wareega Xiga & Chelsea Oo Aan Ka Dhicin
Tababare Ernesto Valverde iyo kooxdiisa Barcelona ayaa haatan dareemi kara kalsooni kadib bar-barihii 1/1 ahaa ee ay kooxda Chelsea kula galeen Stamford Bridge Marka la eego taariikhda kooxda natiijooyinka lugta hore ee kulamada sida toos ah loo hadho ee champions league.
13 jeer oo ay kooxda Barcelona bar-baro 1/1 ku soo gashay kulan ka baxsan garoonkeeda waxa ay 11 ka mid ah u gudbeen wareega xiga ee tartanka champions leageu.
Marka kaliya ee ay ku fadhilmeen iyaga oo bar-baro 1/1 ku soo galeen meel ka baxsan garoonkooda in ay u gudbaan wareega xiga ayaa ahayd kulamo ay la ciyaareen Juventus & CSKA Moscow.
Sanadkii 1992/1993 Barcelona ayaa bar-baro 1/1 ah la gashay kooxda Caasimada Russia waliba iyaga oo garoonkooda jooga laakiin waxa ay lugtii labaad kala kulantay guuldaro 3/2 ah, dhanka kale kooxda Juventus ayaa Barcelona ku ciqaabtay 2/1 Barcelona sanadkii 2003 kulan ka tirsanaa quarter-final-ka champions league.
Markii ugu dambaysay ee ay natiijadii xalay dhacay waliba u soo baxday wareega xiga ayaa ahayd sanadkii 2010 markaas oo ay Barcelona 4/0 ku garaacday kooxda reer Germany ee Stuttgart kulan ka dhacay garoonka Camp Nou ka hor markii ay 1/1 galeen lugtii 1-aad.
Si kast ha ahaatee kooxda chelsea ayaa lafteeda faraxsanaan karta marka loo eego natiijada ay heshay maadama ay 3 k mid ah 5 kulan oo ay bar-baro 1/1 ah galeen lugta hore u bexeen wareega xiga.
Marka kaliya ee ay ku fashilmeen in ay u baxaan wareega xiga iyaga oo lugta hore bar-baro 1/1 ah galay ayaa ahayd kulan ay la ciyaareen kooxda RCD Mallorca.